नेपालमा कोभिड-१९ निको हुने दर बढ्यो - News Birat
नेपालमा कोभिड-१९ निको हुने दर बढ्यो
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) निको दर बढेको पाइएको छ । विश्वका तुलनामा नेपालमा निको हुने दर बढेको हो । बिहीबारको तथ्यांकअनुसार विश्वमा निको हुने दर ६९.३ प्रतिशत पुग्दा नेपालमा त्यसभन्दा बढी ९४.२ प्रतिशत पुगेको छ ।
विश्वमा ६ करोड ९२ लाख ५४ हजार ३ सय संक्रमित भएको अवस्थामा ४ करोड ८० लाख ९ हजार ४ सय ३७ जना निको भएका छन् । बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २ लाख ४५ हजार ६ सय ५० संक्रमितमध्ये २ लाख ३१ हजार ६० सय १ जना निको भई घर फर्किसकेका छन् ।
नेपालमा कुनै समय ६०/६२ प्रतिशत मात्र कोभिड-१९ का संक्रमित निको भएकामा अहिले ९४ भन्दा बढी प्रतिशत पुगेको छ । विगत दुई महिनाको तथ्यांक हेर्दा निको हुने दर ६८ प्रतिशतबाट बढेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा संक्रमितको उपचार सेवा राम्रो भएकाले निको दर बढेको बताए । ‘अहिले उपचार सेवा पनि राम्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संक्रमितको निको हुने दर पनि बढेको हो ।’
गत असोज २८ गते ६८.८ प्रतिशत संक्रमित निको भएका छन् । यस्तै, ९ कात्तिकमा ७०.६, १६ कात्तिकमा ७७.६ र २६ कात्तिकमा ८० प्रतिशत संक्रमित निको भई घर फर्केका थिए ।
यही १९ मंसिरदेखिको तथ्यांक हेर्दा पनि संक्रमित दर बढेको पाइन्छ । १९ मंसिर ९२.९, २० गते ९३.४, २१ गते ९३.७, २२ गते ९४, २३ गते ९४.१ र २४ गते ९४.३ प्रतिशत संक्रमित निको भएका छन् ।
बिहीबार मात्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ९४.२ प्रतिशत संक्रमित निको भएका छन् । सो दिन एक हजार ६४ जना निको भई घर फर्किएका थिए ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले उपचार पद्धति अन्य मुलुकको जस्तो भए पनि अहिले लक्षण नभएका संक्रमित घरमै बसेर निको हुने गरेको बताए । उनले परीक्षण नै कम भएकाले संक्रमित पनि कम हुने भएकाले निको हुने दर बढेको जिकिर गरे ।
सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालका डा. प्रवीण नेपाल परीक्षण नै कम भएर सङ्क्रमणको दर पनि कम देखिनाले निको हुनेको संख्या बढेको बताउँछन् ।
यस्तै, नेपालमा विश्वकाे तुलनामा मृत्युदर पनि कम छ । पछिल्लो तथ्यांकमा नेपालमा संक्रमितमध्ये ०.६७ प्रतिशत मात्र मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । प्रतिदश लाखमा ५६.५ जनाको मात्र मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म १ हजार ६ सय ६३ जनाको सङ्क्रमणका कारणले निधन भइसकेको छ ।
विश्वमा २.३ प्रतिशत संक्रमितको कोभिड-१९ का कारणले मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । विश्वमा १५ लाख ७६ हजार ८५ जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । रासस
शुक्रबार, २६ मंसिर २०७७, १८:०० December 11, 2020 मा प्रकाशित